Wzọ atọ iji jiri nyocha maka nyocha ahịa ka mma | Martech Zone
Ohere inweta bụ na ọ bụrụ na ị na-agụ Martech Zone, ị maraworị otu mkpa iduzi ahịa ahịa dị mkpa na atụmatụ azụmaahịa ọ bụla. N'ime ebe a na SurveyMonkey, anyị kwenyere na ịmara nke ọma mgbe ị na-eme mkpebi bụ ihe kachasị mma ị ga - eme maka azụmaahịa gị (yana ndụ onwe gị, kwa!).
Nyocha ndị dị n'ịntanetị bụ ụzọ dị mma iji mee nyocha ahịa ngwa ngwa, ngwa ngwa, na ọnụ ahịa nke ọma. Ndị a bụ ụzọ 3 ị nwere ike isi tinye ha n'ọrụ atụmatụ azụmaahịa gị taa:
1. Kọwaa ahịa gị
O doro anya na akụkụ kachasị mkpa nke nyocha ahịa na-akọwa ahịa. May nwere ike ịmara ụlọ ọrụ gị na ngwaahịa gị na sayensị, mana nke ahụ ga-eme ka ị nweta. Ndị ọcha, ndị nwoke na-alụbeghị nwanyị nọ na 30 si na-azụ ncha ntutu gị, ka ụmụ agbọghọ nọ n'afọ iri na ụma ọ bụ ndị ahịa gị? Azịza nye ajụjụ a ga-enwe nnukwu mmetụta na atụmatụ azụmaahịa gị, yabụ ịchọrọ ijide n'aka na ị nwere obi ike na ya.
Zipu nyocha onu ogugu ndi mmadu nye ndi ahia gi, ndi ahia gi, ma obu ndi ozo. Jiri ọkachamara mepụtara ndebiri, ma ọ bụ mepụta nke gị. Jụọ ha gbasara afọ ndụ ha, okike ha, agbụrụ ha, agụ akwụkwọ ha, na mmasi ha. Jụọ otu ha si eji ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ gị, ma jụọ maka nzaghachi ha. Ka ị matara ndị ha bụ na otu ha si eji ngwaahịa gị, ọ ga - eme ka ị nwee ike igbo mkpa ha ma mee ka ha lọghachi maka ihe ndị ọzọ.
2. Uche Uche
Gbaa a echiche echiche iji nyochaa nzaghachi ndị ahịa na ngwaahịa, akara, ma ọ bụ echiche, tupu ewebata ya n'ahịa. Ọ ga-eweta ụzọ dị mfe ma dịkwa mfe iji melite ngwaahịa gị, chọpụta nsogbu ma ọ bụ adịghị ike ọ bụla, ma hụ na ihe oyiyi gị ma ọ bụ akara gị ezubere nke ọma.
Tinye foto nke echiche gị maka akara ngosi gị, eserese, ma ọ bụ mgbasa ozi na nyocha ịntanetị wee mee ka ndị na-ege gị ntị họrọ nke kachasị amasị ha. Jụọ ha ihe kwụpụtara ha, ihe onyonyo ahụ mere ka ha chee ma nwee mmetụta.
Gịnị ma ọ bụrụ na ihe ịchọrọ nzaghachi abụghị ihe onyonyo ma ọ bụ akara ngosi, kama ọ bụ echiche? Dee nkọwa dị mkpirikpi maka ndị ị zara ka ịgụrụ ha. Jụzie ha ihe ha chetara, ihe ha mere, olee nsogbu ha nwere ike ịtụ anya ya. Ndị dị iche iche ga-ahụ nsogbu na ohere dị iche iche n'echiche gị, nzaghachi ha ga-aba uru ka ị na-edozi atụmatụ gị.
Amaghi uzo iru ndị ị na-ege ntị? Anyị nwere nke ị nwere ike ịgwa…
3. Nweta Nzaghachi
Ozugbo ị kọwapụtara njirimara ahịa ahịa gị, nwalee echiche gị, ma mepụta ngwaahịa gị, enwere usoro dị oke mkpa na usoro ahụ. Na-arịọ ma na-enyocha nzaghachi dị oké mkpa ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịnọgide na-eweta nsonaazụ dị ukwuu. Chọpụta ihe ị mere nke ọma, ihe iseokwu ndị mmadụ na-enwe, yana ntụzịaka ha chọrọ ka ị gbasoo n’ọdịnihu.
Kwesighi ịnara ntụnye niile ị nwetara mgbe ị na-arịọ nzaghachi. Mana site na ịrịọ maka ya na ị attentiona ntị na ihe ndị mmadụ na-ekwu, ị ga-adị njikere nke ọma ịga nke ọma n'ihe ndị ị ga-eme n'ọdịnihu. Ndị ahịa gị ga-enwe ekele na ị rịọrọ, ha ga-enwe ekele maka ndozi ị na-eme karịa.
Ikwesighi itinye ego iji tinye aka na nyocha ahịa di ire. Kwesịrị naanị iji uru ndị ọrụ ọnụ ahịa dị na ịntanetị. Na SurveyMonkey anyị na-arụ ọrụ mgbe niile iji melite teknụzụ anyị iji nyere gị aka ịme mkpebi gị kachasị mma. Site na izipu nyocha iji ruo ahịa gị, ị nwere ike ijide n'aka na mbọ gị dị ka o kwere mee.
Nnyocha na-enye obi ụtọ!
Tags: nyocha echicheihe ngosinchọpụta ahịanyocha onlinenzaghachi ngwaahịaSurveyMonkeynyocha maka nyocha ahia
Feb 13, 2012 na 10:53 PM
Anyị na-eme nyocha kwa afọ nke mmekọrịta mmadụ na ibe ya na-eji mmekọrịta mmadụ na ibe ya, na-eji surveymonkey maka oge mbụ. Obi dị m ezigbo ụtọ na ọ dịrị mfe iru. Ma ihe mere n'ezie onye na-akwado m bụ ndị nchịkọta dị iche iche. Enwere m obi ụtọ ịhụ ụdị nyiwe na-akwọ ndị kachasị azaghachi.
Ọ ga-amasị gị ịkpọ gị ka ị kọọrọ gị echiche gị. Twere nyocha ugbua.
Feb 14, 2012 na 2:54 PM
Loraine - Ekwenyere m na gị na "mfe iji wuo" comment. Mgbe anyị na-eme R&D maka mbido m malitere, anyị dabere na SurveyMonkey maka ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ndị niile na-achịkọta data. Echere m na ngwá ọrụ a kwesịrị ịbụ ihe achọrọ maka ndị ọchụnta ego na mmalite!
Feb 15, 2012 na 2:09 PM
Nnyocha ndị e mere bụ ezigbo ebe a na-esi enweta ezigbo ozi. Ọ ga-adị mma ịnụ echiche gị banyere omume nke ịchịkọta nzaghachi ndị ahịa site na mgbasa ozi mmekọrịta na otu nke a ga-esi metụta oghere ọdịnala weebụ "ọdịnala". Ànyị na-aga na oghere nke ha agaghị aba uru ọzọ?
Luke Oge oyi